မောင်ဥက္ကာနေမကောင်းဘူး | ဥက္ကာကိုကို
မောင်ဥက္ကာနေမကောင်းဘူး	Posted by oakkarkoko on August 25, 2010
Posted in: ရောက်တတ်ရာရာ.	1 Comment
မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ သြဂုတ်လ (ဒီလ) ၁၃ ရက် ၊သောကြာနေ့မှာ ကျနော်စတင်ဖျားပါတယ်…. ။ နှစ်ပတ်လောက်ရှိပါပြီ… ဖျားလိုက် ပြန်ကောင်းလိုက်ပေါ့။
ဆိုးတာက ရုံးမတက်နိုင်တာပါပဲ။ ကျနော့်အလုပ်က သတင်းထောက်ဆိုတော့ မလှုပ်ရှားနိုင်ရင် မဖြစ်ဘူးဗျ။ ရုံးကိုတော့ ကြားထဲမှာ သုံးခေါက်လောက်ရောက်ပါသေးတယ်။ အဲကွန်းဒဏ်မခံနိုင်တာကြောင့် နောက်နေ့တွေမသွားဖြစ်ပါဘူး။ အိမ်မှာဘဲ နားနေဖြစ်တယ်ပေါ့။ ခေါင်းမူးနေပြီးအားပြတ်နေတာနဲ့ အိမ်အောက်လည်းသိပ်မဆင်းဖြစ်ပါဘူး။
ချစ်သူကောင်မလေးကတော့ အားလပ်တိုင်း၊ မအားလပ်တိုင်း လာလာကြည့်ရှုပေးရှာပါတယ်။ သူရှိနေလို့ တစ်အား… ရှိတာပါ။ ပါးစပ်ပျက်နေလို့ အရမ်းခံရခက် ပါတယ်။ ဘာစားစား ခါးတဲ့အရသာပဲတွေ့နေပါတယ်။ အချဉ်တွေ သိပ်စားချင်တာပဲ။ သေမှာစိုးလို့မစားရဲတာပေါ့။
သတင်းတစ်ခုကတော့ ဖျားတဲ့ရက်ကစပြီး အရက်မသောက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဟဲ…ဟီး….ဟီး။ ၂၀၀၉ နှစ်စကနေ ၂၀၁၀ ဒီလ အထိတစ်နှစ်ကျော်တိုင် တစ်ရက်မှ မနားဘဲ သောက်လာခဲ့တဲ့အရက်က ခုတော့သောက်ချင်စိတ်ပျောက်နေပါတယ်….။
မောင်ဥက္ကာနယ်လှည့်အရက်သောက်စဉ်က အင်းလျားကန်တစ်နေရာတွင် ဘီအီးကိုရေသန့်ဘူးထဲထည့်သောက်ပြီး ရီဝေေ၀ဖြစ်နေစဉ်။
ဘယ်နှရက်ခံမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ကြရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ ဒါနဲ့ ဆေးလိပ်လေးလည်း မသောက်ဖြစ်ဘူးကော ခင်ဗျား။ အွန်လိုင်းလည်း မတက်ဖြစ်တာကြာပါပြီ။ အွန်လိုင်းတက်တိုင်း အကောင့်ထဲက သောက်ဖော်စားဖက်တွေက ၀ိုင်းပြီး ခေါ်ကြတာနဲ့၊ ခနဲ့ကြတာနဲ့ အကောင်းကိုမပြောကြလေတော့ ကျနော်လည်းကြောက်တယ်ကောဗျ။ တကယ်တော့ သူတို့က သူတို့ရဲ့ သောက်ဖော်စားဖက်တစ်ကောင် လျော့သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် ကျနော်အရက်မသောက်ဘူးဆိုတာကို မကောင်းမြင်ပေးကြတာနဲ့တူပါတယ်…. အဟဲ…။
သောက်နေကျဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့ ဘူတာရုံလမ်းနဲ့ သုခမှတ်တိုင်ကြားက တေလေဗိမ္မာန်ကိုလည်းမရောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ…။ သောက်နေကျ ကုလားတွေတော့ လွမ်းနေတော့မှာပဲ။ (ဟဲဟဲ)။ ကျနော့်ကောင်မလေးကတော့ ပြောပါတယ်။ သောက်တာတွေ့ရင်တော့မလွယ်ဘူးမှတ်တဲ့။ မလွယ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။ အဲဒီတော့ မသောက်ပါဘူး။ ရုံးကလူတချို့ကတော့ ဒီကောင်မသောက်တော့ဘူးဆိုတာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မသင်္ကာမျက်လုံးရွဲကြီးတွေနဲ့ ကျနော့်ကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် အကဲခတ်ကြပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဖိုးရိုးဖားယားကလေး နေပြလိုက်ရတာပေါ့။ နော့။
သောက်စကားပြောရင်ဒီလိုပဲဗျ… ကျနော်ကလေရှည်နေကရော…. စပျစ်သီးစားချင်ပေမယ့် ရင်ကျပ်နေတယ်ဗျ။ ဆေးလိပ်တစ်ဖွာလောက်သောက်လိုက်တာနဲ့ အမောဖောက်လာရော။ ဒီတစ်ခါတော့ဆေးလိပ်တကယ်ပြတ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်ကျန်းမာရေးနဲ့မတည့်တာသိပေမယ့်ဇွတ်သောက်နေမိတာ။ ချပါတီစားချင်စိတ်က မနက်ပိုင်းဆိုပေါ်လာတတ်တယ်။ ဘာမှမရှိရင်တော့ ပရီမီယာတစ်ခွက်ကို ပေါင်မုန့် သုံးချပ်နဲ့လွေးလိုက်ရတော့တာပဲ။ တိုက်အောက်ခဏဆင်းတုန်းလေး မုန်လာဥနီဖျော်ရည်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တာ အသားကုန်ကျပ်ပြီးအသက်ရှုလို့မရဖြစ်ပါကရော။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အင်္ဂလိပ်ဆေးနဲ့ ဗမာဆေးတွေတွဲချနေရတယ်ဗျာ….။
ဆေးခန်းနှစ်ရက်ပြတာ မကောင်းလာတဲ့အတွက် မသွားတော့ဘူး။ ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်ပဲသောက်နေလိုက်တယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတော့ နည်းနည်းသက်သာလာလို့ အားဆေးနဲ့မြှောင်နေရတယ်။ အော်ရာမင်း-ဂျီ သောက်နေတယ်လေ။ ညဖက်ဆိုရင်တော့ ပန်းဝတ်မှုန် အပူငြိမ်းဆေး၊ ကေသီပန်ဝမ်းပျော့ဆေး၊ အဆုတ်ပုံ ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးတို့ အဲဒါလေးတွေသောက်ပြီးအိပ်နေရတယ်ပေါ့။
ခြောက်လွှာတိုက်ခန်းပေါ်က အဆင်းအတက်လုပ်ရတာမောတယ်။ ရုံးကိုပေးရမယ့် သတင်းအကြွေးတွေထပ်နေပြီ။ နည်းနည်းလှုပ်ရှားတာနဲ့မူးနေတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကျေနပ်ပြန်ဘူး။ ဒီလအတွက်လစာတော့ တော်တော်ဖြတ်ခံရမယ့်သဘောရှိတယ်။ အယ်ဒီတာမင်းတွေလည်း ငြိုငြင်နေလောက်ပြီ။ မြန်မြန်နေကောင်းပြီး သတင်းတွေပြန်လိုက်ရမယ်။ ဇက်ကြောတင်းနေတယ် (စောက်ကြောတင်းတာမဟုတ်ပါ)။ ၀တ္တုရှည်တစ်ပုဒ်ရေးချင်စိတ်ဝင်နေတယ်။ ကျနော်နေကောင်းပါစေ….။
ကမ္ဘာကြီးလည်းနေကောင်းပါစေ….။ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကြီးလည်း နေကောင်းပါစေခင်ဗျား….။ ။
← ကမ္ဘာဦးအစက ခုမှရောက်လာတဲ့သီချင်း	ကုတင်အမှတ် ၃၂ မှာ မောင်ဥက္ကာဟာ လူနာလိုလို →	One comment on “မောင်ဥက္ကာနေမကောင်းဘူး”
မဗေဒါ on August 25, 2010 at 12:01 pm said:
အမြန်နေကောင်းပါစေ.. အားရှိတာတွေ စားချင်သည်ဖြစ်စေ မစားချင်သည်ဖြစ်စေ စားသာစားပစ်..။ အချဉ်လည်း စားလို့ရပါတယ်.. ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.. စားသာစား.. ဟိုဟာတခုပဲ ချစ်ချစ် မကြိုက်တော့ မလုပ်နဲ့ (အုံး)ပေါ့.. နောင် မှ.. ။
ရွေးကောက်ပွဲ လား .. အဟမ်း..။ အဟမ်း..။ မဗေဒါ (၈၈)